ချစ်ရည်လူးခြင်းကိုသာရပ်တန့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲ – Trend.com.mm
ဒါဟာ ကျန်းမာရေးရှုထောင့်အနေနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးဆက်တွေကို ပြန်လည်ဝေမျှပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘဝမှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပုံမှန် sex life တစ်ခုရှိနေဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ အကြောင်းပြချက်ကောင်းတွေရှိနေတာကြောင့် ချစ်ရည်လူးခြင်းကိုရပ်တန့်မပစ်လိုက်ပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ချစ်ရည်လူးခြင်းကိုသာ သင်ရပ်တန့်ပစ်လိုက်မယ်ဆို ဘယ်လိုအကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာနိုင်သလဲ ?
အချိန်ကြာမြင့်စွာ ချစ်ရည်မလူးပဲနေတဲ့အခါ သင့်ရဲ့ကိုယ်ခံအားစနစ်တွေဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကိုယ်ခံအားနည်းလာပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါ ခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်ဖို့ချောင်းနေတဲ့ ပိုးမွှားတွေအတွက်ပိုမိုလွယ်ကူသွားပြီး အအေးမိတာ ၊ ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှု Level မြင့်တက်
စိတ်ဖိစီးမှုကို အကောင်းဆုံးလျော့ချပေးနိုင်တာဟာ sex ပါပဲ။ ပုံမှန်ချစ်ရည်လူးခြင်းဖြင့် ရလာတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှု ပမာဏတွေကို လုံးဝပျောက်စင်စေပြီး နေ့တိုင်းကိုလန်းဆန်းတက်ကြွစေတယ်။ အရေးကြီးတဲ့အရာတွေ ဟန်ချက်မညီရင်တော့ သင်ဟာအချိန်မရွေးပေါက်ကွဲနိုင်တဲ့ ဗုံးတစ်လုံးလိုပဲ။ပတ်ဝန်းကျင်မှ လူတွေလည်း သင့်ကိုထိတ်လန့်နေရပါလိမ့်မယ်။
ယုံဖို့တော့ ခက်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်ပါ။ ချက်ချင်းတော့မသိသာပေမယ့် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အိပ်ရာမှထဖို့ကို ပျင်းလာပါလိမ့်မယ်။ ယောက်ျားလေးတွေဆို စိတ်လုံးဝမကြွတော့ပဲ မိန်းကလေးတွေလည်း ပြီးမြောက်ဖို့ကိုခက်ခဲလာပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် အချိန်အကြာကြီး ဒီတိုင်းမနေပါနဲ့။ အမြဲတမ်းတက်ကြွလန်းဆန်းမှုရှိနေအောင် ဒီလိုကိစ္စတွေကလည်း တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအရေးပါနေတာမို့ပါ။
sex life က သာယာမှုမရှိတဲ့အခါ တစ်ချို့ ဆို ထူးဆန်းတဲ့အိပ်မက်တွေတောင် မက်လာတတ်ကြပါတယ်။ ဘယ်လိုဆက်စပ်မှုရှိနေမလဲ သေချာမပြနိုင်ပေမယ့် အိပ်မက်တွေရဲ့သဘောက သင့်မှာလိုအပ်နေတဲ့အရာကို သတိပေးနေခြင်းတစ်မျိုးပါပဲ။ ဆိုတော့ ထူးဆန်းတဲ့အိပ်မက်တွေမက်နေရင် သိပ်မလန့်ပါနဲ့။ ကိုယ့်ဘာသာပြန်စဉ်းစားပါ။ ဘာလိုအပ်နေလဲဆိုတာပေါ့။
တစ်ကိုယ်တည်းသမားတွေကတော့ အချိန်အကြာကြီး ချစ်ရည်မလူးနိုင်တာဖြစ်သင့်ပေမယ့် ချစ်သူရှိသူတွေအနေနဲ့ အတူတူအိပ်တာတွေ ကြားထဲမှာတဖြည်းဖြည်းလျော့လာတဲ့အခါ လူချင်းကိုလည်း ပိုမိုဝေးကွာလာစေပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် relationship တစ်ခုမှာ ဒီလိုအရေးကိစ္စတွေကလည်း တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအရေးပါတယ်ဆိုတာ သတိထားသင့်ပါတယ်။
ယောက်ျားလေးတွေဆို အချိန်ကြာကြီး ချစ်ရည်မလူးပဲနေတဲ့အခါ ပရော့စတိတ်မှာပြဿနာဖြစ်လာပြီး ကင်ဆာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာစိတ်အာသာဖြေမယ်ဆိုရင်တော့ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေကို အနည်းငယ်တော့လျော့ချနိုင်ပါတယ်။ ကဲ.. ဘယ်လိုလဲ ?
ဒါဟာ ကနျြးမာရေးရှုထောငျ့အနနေဲ့ ကွညျ့မယျဆိုရငျ ဖွဈလာနိုငျတဲ့အကြိုးဆကျတှကေို ပွနျလညျဝမြှေပေးခွငျးဖွဈပါတယျ။ ဘဝမှာ ကနျြးမာရေးနဲ့ ပုံမှနျ sex life တဈခုရှိနဖေို့ကလညျး အရေးကွီးပါတယျ။ အကွောငျးပွခကျြကောငျးတှရှေိနတောကွောငျ့ ခဈြရညျလူးခွငျးကိုရပျတနျ့မပဈလိုကျပါနဲ့လို့ပွောခငျြပါတယျ။ တကယျလို့ ခဈြရညျလူးခွငျးကိုသာ သငျရပျတနျ့ပဈလိုကျမယျဆို ဘယျလိုအကြိုးဆကျတှဖွေဈလာနိုငျသလဲ ?
အခြိနျကွာမွငျ့စှာ ခဈြရညျမလူးပဲနတေဲ့အခါ သငျ့ရဲ့ကိုယျခံအားစနဈတှဟော တဖွညျးဖွညျးနဲ့ ကိုယျခံအားနညျးလာပါတယျ။ အဲ့ဒီအခါ ခန်ဓာကိုယျထဲဝငျဖို့ခြောငျးနတေဲ့ ပိုးမှားတှအေတှကျပိုမိုလှယျကူသှားပွီး အအေးမိတာ ၊ ကိုယျလကျကိုကျခဲတာမြိုးတှဖွေဈလာနိုငျပါတယျ။
စိတျဖိစီးမှု Level မွငျ့တကျ
စိတျဖိစီးမှုကို အကောငျးဆုံးလြော့ခပြေးနိုငျတာဟာ sex ပါပဲ။ ပုံမှနျခဈြရညျလူးခွငျးဖွငျ့ ရလာတဲ့ စိတျဖိစီးမှု ပမာဏတှကေို လုံးဝပြောကျစငျစပွေီး နတေို့ငျးကိုလနျးဆနျးတကျကွှစတေယျ။ အရေးကွီးတဲ့အရာတှေ ဟနျခကျြမညီရငျတော့ သငျဟာအခြိနျမရှေးပေါကျကှဲနိုငျတဲ့ ဗုံးတဈလုံးလိုပဲ။ပတျဝနျးကငျြမှ လူတှလေညျး သငျ့ကိုထိတျလနျ့နရေပါလိမျ့မယျ။
ယုံဖို့တော့ ခကျလိမျ့မယျ။ ဒါပမေယျ့ တကယျပါ။ ခကျြခငျြးတော့မသိသာပမေယျ့ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ အိပျရာမှထဖို့ကို ပငျြးလာပါလိမျ့မယျ။ ယောကျြားလေးတှဆေို စိတျလုံးဝမကွှတော့ပဲ မိနျးကလေးတှလေညျး ပွီးမွောကျဖို့ကိုခကျခဲလာပါလိမျ့မယျ။ ဒါကွောငျ့ အခြိနျအကွာကွီး ဒီတိုငျးမနပေါနဲ့။ အမွဲတမျးတကျကွှလနျးဆနျးမှုရှိနအေောငျ ဒီလိုကိစ်စတှကေလညျး တဈစိတျတဈပိုငျးအရေးပါနတောမို့ပါ။
sex life က သာယာမှုမရှိတဲ့အခါ တဈခြို့ ဆို ထူးဆနျးတဲ့အိပျမကျတှတေောငျ မကျလာတတျကွပါတယျ။ ဘယျလိုဆကျစပျမှုရှိနမေလဲ သခြောမပွနိုငျပမေယျ့ အိပျမကျတှရေဲ့သဘောက သငျ့မှာလိုအပျနတေဲ့အရာကို သတိပေးနခွေငျးတဈမြိုးပါပဲ။ ဆိုတော့ ထူးဆနျးတဲ့အိပျမကျတှမေကျနရေငျ သိပျမလနျ့ပါနဲ့။ ကိုယျ့ဘာသာပွနျစဉျးစားပါ။ ဘာလိုအပျနလေဲဆိုတာပေါ့။
တဈကိုယျတညျးသမားတှကေတော့ အခြိနျအကွာကွီး ခဈြရညျမလူးနိုငျတာဖွဈသငျ့ပမေယျ့ ခဈြသူရှိသူတှအေနနေဲ့ အတူတူအိပျတာတှေ ကွားထဲမှာတဖွညျးဖွညျးလြော့လာတဲ့အခါ လူခငျြးကိုလညျး ပိုမိုဝေးကှာလာစပေါတယျ။ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ relationship တဈခုမှာ ဒီလိုအရေးကိစ်စတှကေလညျး တဈစိတျတဈပိုငျးအရေးပါတယျဆိုတာ သတိထားသငျ့ပါတယျ။
ယောကျြားလေးတှဆေို အခြိနျကွာကွီး ခဈြရညျမလူးပဲနတေဲ့အခါ ပရော့စတိတျမှာပွဿနာဖွဈလာပွီး ကငျဆာဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ ကိုယျ့ဘာသာစိတျအာသာဖွမေယျဆိုရငျတော့ ကငျဆာဖွဈနိုငျခကြေို အနညျးငယျတော့လြော့ခနြိုငျပါတယျ။ ကဲ.. ဘယျလိုလဲ ?
ဥာဏ်ကောင်းထက်မြက်လာလေလေ Single ဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းပိုများများလေလေပါပဲတဲ့ လေဒီတို့…